Teny soa sakafo Asabotsy 2A Paka (Mk. 16,15-20) 25/04/2020 | FKMP
Asabotsy 2A Paka (Mk. 16,15-20) 25/04/2020
Fetin’i Masindahy Marka Evanjelistra
« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niseho tamin’izy iraika ambin’ny folo lahy ka nanao hoe: “Mandehana ianareo amin’izao tontolo izao, mitoria ny Evanjely amin’ny voaary rehetra. Izay hino ka hatao batemy dia ho voavonjy; fa izay tsy hino dia hohelohina. Ary izao no famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin’ny Anarako izy, hiteny amin’ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin’ny marary izy dia ho sitrana ireny.”
Ary rahefa niteny tamin’izy ireo i Jesoa Tompo, dia nakarina any an-danitra, ka mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia lasa nitory hatraiza hatraiza, ka sady niara-niasa taminy ny Tompo no nankatò ny fampianarany tamin’ny fahagagana nomba azy. »
Sarotra hadinoina ny voalazan’i Md. Marka anio, andro fitsingerenan’ny fetiny.
Mafonja amintsika olombelona ny teny apetraky ny olona iray alohan’ny fisarahana farany. Teny faran’i Jesoa alohan’ny iakarany any an-danitra ireo. Teny maniraka.
Efa ho roa arivo taona aorianan’izany andro izany isika izao. Inona no azo ambara ?
Indreo ireo Mompera manohy ny asan’ny Apostoly. Isaorantsika be dia be izy ireo. Maro be ny vita batemy, manambara ny finoana miroborobo izany.
Indrisy anefa fa miseho amin’ny endrika maro samihafa ihany koa ny demony sy ny menarana. Maro ireo sakana mitady hanampoizina ny fiainantsika ka lasa. Misy ihany koa ireo minia tsy mahita, minia tsy mahalala, tsy mino sy minia manadino ny fisian’ny Tompo Zanahary. Mila fanasitranana izany. Ny finoantsika, ny fifandeferana, ny fanetren-tena, ny fiaraha-mientana no hanova antsika ho lasa mpanasitrana sy hitondrana fahagagana. Ny fibebahana no fototra voalohany iorenan’ny fanasitranana ny fo sy ny fanahy.
Koloy, iaino, zarao sy arovy ary ny finoantsika eto ampiandrasana ny fiverenan’Ilay Tompo naniraka.
Previous Post: Zoma 2A Paka (Jo 6,1-15) 24/04/2020
Next Post: Alatsinainy 3A Paka (Jo 6,22-29) 27/04/2020